FightingGame – Gaming Noodle
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Fighting ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ EVO 2019
[Zawgyi] ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Fighting ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ EVO 2019 August လထဲမှာ Gamer တွေတော်တော်များများအတွက် ရင်ခုန်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အများစောင့်နေကြတဲ့ Dota2The International9မလာခင်မှာပဲ စစချင်း August2ရက်နေ့မှာ အကြီးဆုံး Global Fighting Game Tournament ဖြစ်တဲ့ EVO 2019 ဆိုပြီး လာပါတော့မယ်။ သူ့ထူးခြားချက်က Qualifier ဘာညာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ Event ရောက်မှ ဆက်တိုက် လူတွေအများကြီး ဆော့ကြပြိုင်ကြတာပါ။ ရက်အတိအကျကတော့ ခုလာမယ့် သောကြာမနက်ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေထိဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ လာ့စ်ဗေးဂစ်မြိ်ု့ရှိ မန္တလေးဘေးဟိုတယ်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ EVO ရဲ့ …
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Fighting ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ EVO 2019 Read More »
FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (3)
[Zawgyi] FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (3) ​ရှေ့က article မှာ အ​ခြေခံအ​ခေါ်အ​ဝေါ်​တွေအပြင်​ Frame Trap, Cancel စတဲ့ ပွဲတစ်​ပွဲမှာအ​ရေးကြီးတဲ့ tech အကွက်​​တွေအထိရှင်းပြခဲ့ပါတယ်​။ အခု အပိုင်း ၃ မှာ​တော့ တကယ့်​ပွဲထဲ​ရောက်​ရင်​​သတိထားရမယ့်​ အ​ခြေအ​နေ​ပေါ်ကြည့်​ပြီးလုပ်​ရမယ့်​အချက်​​တွေကိုရှင်းပြ​ပေးပါမယ်​။ Anti-air ရှေ့မှာ​ပြောထားဖူးတဲ့အတိုင်း anti air ဆိုတာ ​လေ​ပေါ်ကလာတဲ့ရန်​သူကိုပြန်​ကာပြီးချတဲ့အကွက်​ပါ။ Midrange character ​တွေမှာအရမ်း​ကောင်းတဲ့ anti air ​တွေပါတယ်​လို့လဲ​ပြောဖူးပါတယ်​။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ လက်​ဗလာနဲ့ character ​တွေကအ​ပေါ်ကိုပင့်​ထိုးတဲ့အချိန်​မှာ သူတို့က ဓား​တွေလှံ​တွေနဲ့ အ​ပေါ်ကိုရမ်းတာပါ။ လက်​သီးနဲ့ဓား Hitbox အကြီးအ​သေးကအရမ်းသိသာပါတယ်​။ Anti Air ကိုအချိန်​မှီသုံးနိုင်​ရင်​ ​လေ​ပေါ်ကလာတဲ့ဘယ်​တိုက်​ကွက်​မဆို အ​ဝေးပစ်​ projectile ​တွေကလွဲလို့အကုန်​ကာနိုင်​ပါတယ်​ တချို့ …
FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (3) Read More »
FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (1)
[ZawGyi] FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ (1) Fighting Game တစ်​ခုကို စ​ဆော့လို့ ​တွေ့တဲ့ခလုတ်​​တွေ​လျှောက်​နှိပ်​​နေရင်​ အချိန်​အတိုင်းအတာတစ်​ခုမှာ ဘာတွေဖြစ်​လာနိုင်​လဲ ဆိုတာကို အရင်​ဆောင်းပါးမှာ​ပြောထားပြီးသား ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီတစ်ခါ​တော့ Street Fighter, Tekken, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat, Blazblue အစရှိသ​ရွေ့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​ fighting game ​တွေ​ ဆော့မယ်ဆိုရင်​သိထားသင့်​တဲ့အချက်​များ ပထမပိုင်းကို အကျယ်​ဖွင့်​ရှင်းပြ​ပေးပါ့မယ်​။ ပထမဆုံးသိထားရမှာက Naruto Ultimate Ninja Storm, Jump Force တို့လိုဂိမ်းမျိုးကို Arena Fighter လို့ သက်​သက်​​ခေါ်​ကြောင်းပါ။ ဒီ​ကောင်​​တွေက fan ​တွေအကြိုက်​လုပ်​ထားတဲ့ ဂိမ်းမျိုးဘက်​ပို​ရောက်​ပြီး Fighting Game …
FIGHTING GAME ကစားရင် သိထားသင့်သောအချက်များ Part (1) Read More »
ဘာလို့ FIGHTING GAMES တွေ လူဆော့နည်းတာလဲ?
2 Comments	/ FEATURES / By Gaming Noodle
ဘာလို့ FIGHTING GAMES တွေ လူဆော့နည်းတာလဲ? Fighting Games ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်း Street Fighter, Tekken နဲ့ Mortal Kombat ကိုပြေးမြင်ကြမှာပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်လားမေးရင်လဲ ၁၀၀ မှာ အယောက် ၉၀ လောက်က ကြိုက်တယ်ပဲ ဖြေကြမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆော့ဖြစ်ကြလားဆို အများစုက ဟင့်အင်းပဲဖြေကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Dota2, League of Legends လို MOBA ဂိမ်းတွေ CSGO နဲ့ PUBG လို Shooter Games တွေ ဦးဆောင်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Fighting Game တွေဟာ အရမ်း Niche ကသိကအောက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ကြိုက်ရဲ့သားနဲ့ …
ဘာလို့ FIGHTING GAMES တွေ လူဆော့နည်းတာလဲ? Read More »